ရထား, ဘတ်စ်ကားနဲ့မတူပဲ, ဖြောင့်မှတဆင့်ခရီးသွားလာ ကျေးလက်. ဒါကမယ့်အစားတစ်ဦးငြီးငွေ့စရာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာစိုက်ကြည့်တာကိုဆိုလိုတယ်, သို့မဟုတ်အသုံးစရိတ်နာရီရိုးရှင်းစွာအရပျသို့အရပျမှရွေ့လျား, သငျသညျအခွင့်အလမ်းများ မြင် သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောတိုင်းပြည်ပို. သင်သည်သင်၏လာမည့် destination သို့ပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီပြီးတာနဲ့, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌ရှိရလိမ့်မယ်. အရှိန်အလွန်မြန်သော ဥရောပတိုက်တွင်ဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်ရထား. ဒါဟာမ brainer ဖြစ်ပါသည်.
'' အဘယ်သူမျှမကြောပိတ်ဆို့မှု '' by, ကျွန်တော် '' အဘယ်သူမျှမချိုမြိန်စည်းချက် '' ဆိုလိုဘူး. ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမဆိုလို TRAFFIC ကြောပိတ်ဆို့မှု. အဲဒီရထားလမ်းပုဒ် ပတ်သက်. အရာ - ထိုလမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းဘာမှမရှိဘူး. သူတို့ကမှဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းမှန် သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ.
အခါဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်ရထား၏ခရီးသွားလာမှကြွလာ. နှစ်သိမ့်သရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏. သငျသညျဥရောပတိုက်တွင်ဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်ရထားများအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းကြသောအခါ, ရထားလမ်းကြောင်း en ပေမယ့် In-အကြားမသာအနိုင်ရ, လွန်း! မီးရထားဘူတာမှာ, သင်လုပ်နိုင်သည် နှစ်သိမ့်၌သင်တို့၏ရထားစောင့်ဆိုင်းနှင့် လုံခွုံမှု, ထိုင်ဖို့နေရာများ၏ပဒေသာနှင့်အတူ, စားသောက် သို့မဟုတ်သင့်လမ်းခရီးဘို့ရိက္ခာဝယ်ဖို့.
တစ်ဦးရထားတွင်, you have total flexibility; ကိုယ့်ကိုတက်လှည့်နှင့်သင့်အစီအစဉ်များကိုက်ညီဖို့လေ့ကိုမဆိုအပေါ်ခုန်.
အပေါ် Go, သင့်ရဲ့ရထားခရီးစဉ်နှင့်အတူစာအုပ်ဆိုင် တစ်ဦးကရထား Save. ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အများကြီးပိုအာကာသရထားနှင့်အတူ, သငျသညျကိုပြန်ထိုင်ဖို့အခန်းတစ်ခန်းရှိသည်လိမ့်မယ်, အနားယူနှင့်ပျော်မွေ့ရှုခင်းနေစဉ်သင်အစီအစဉ်၏နောက်ရွှေ့.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-versus-bus/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#bustravel ဘတ်စ်ကား europetravel longtrainjourneys ဘူတာရုံ ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား TrainVSBus traveltips